Chain Link ngere - China Hebei Samsung Metal waya ntupu
Chain Link ngere na-aha ya bụ diamond waya ntupu na diamond oghere. Ọ na-mere dị iche iche na metal wires ekwuo site yinye njikọ ngere igwe. Anyị yinye njikọ ngere ihe ndị dị na igwe anaghị agba nchara, kpaliri, na ịkwanyere ntekwasa waya. Ha na-ejikari n'ime ubi, egwuregwu yad, ulo oru na saịtị, ụlọ, okporo ụzọ na ihe n'ihi na ìgwè mmadụ na-achịkwa. Ịkpa ákwà na Akụkụ: edo mmeghe, ewepụghị elu, mfe ịkpa ákwà na ndị bara uru iji. Easy na mgbanwe maka echichi na ejikọta. Tra ...
Min.Order ibu: 100 Meter / Mita
Tụkwasịnụ Ikike: 80000 Meter / Mita kwa ọnwa
Chain Link ngere na-aha ya bụ diamond waya ntupu na diamond oghere. Ọ na-mere dị iche iche na metal wires ekwuo site yinye njikọ ngere igwe. Anyị yinye njikọ ngere ihe ndị dị na igwe anaghị agba nchara, kpaliri, na ịkwanyere ntekwasa waya. Ha na-ejikari n'ime ubi, egwuregwu yad, ulo oru na saịtị, ụlọ, okporo ụzọ na ihe n'ihi na ìgwè mmadụ na-achịkwa.
ịkpa ákwà na Akụkụ: edo mmeghe, ewepụghị elu, mfe ịkpa ákwà na ndị bara uru iji. Easy na mgbanwe maka echichi na ejikọta. Traditional Chain-Link fencing bụ ezigbo oke maka a smart, ala, ókè fences maka ụlọ ọrụ. Anyị na-emepụta ulo oru yinye njikọ fences na-ekpo ọkụ-tinye galvanized, ịkwanyere ntekwasa na igwe anaghị agba nchara wires. Ndị kasị ewu ewu na-kpaliri yinye njikọ nsu, nke nwere ezi iguzogide mmiri na ikuku corrosion. Otú ọ dị, ịkwanyere ntekwasa yinye njikọ anwụ ngwa ngwa dị mma karịa galvanized nsu.
Chain Link ngere Edge Types
E nwere atọ ihu ụdị-ahọrọ: eti - eti, ighikota - nje ọgụ ma ọ bụ eti - nje ọgụ. Chain njikọ ngere na nje ọgụ ga-emekarị tinye nche.
Knuckling - Nke a na okwu na-eji na-akọwa ụdị nke selvage nwetara site n'ijikọta n'akụkụ abụọ nke waya nsọtụ na mgbe ekwe waya agwụ azụ n'ime a mechiri emechi akaghị. Abụkarị eti bụ ọkọlọtọ gwụla ma ma kwuru.
Agbagọkwa - Nke a na okwu na-eji na-akọwa ụdị nke selvage nwetara site na-agbagọkwa n'akụkụ abụọ nke waya njedebe ọnụ a mechiri emechi helix nke 1-1 / 2 igwe ibe, nke bụ Ẹkot atọ zuru twists, na cuffing na waya na-agwụ mgbe a nkọ n'akuku inye nkọ ihe. The waya agwụ n'ofè nje ọgụ ga-dịkarịa ala 1/4 inch (6.4mm) ogologo.
Chain Link ngere nkọwa:
Chain Link ngere nkọwa: Waya n'obosara 1.2mm - 5.0mm,
ntupu size 20mm -100mm
Roll obosara 0.5m, 1.0m, 1.25m, 1.5m, 1.8m, 2.0m, 2.5m
Roll ogologo 10m-50m .
Nke ngere ga m ịzụta, kpaliri ma ọ bụ ịkwanyere ntekwasa yinye-njikọ fencing?
Ọ bụrụ na ị chọrọ yinye njikọ ngere guzo 30-40 afọ, mgbe ahụ, ị ga-azụrụ naanị nsu na a waya dayameta nke 3mm - 4mm. Ọ bụrụ na ị chọrọ nwere a ọzọ mara mma anya kwesịrị ịzụ ndị ịkwanyere ntekwasa nsu. Dị nnọọ mkpa na-echebe megide corrosion, ị nwere ike họrọ ngere na galvanized. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ na-etinye ngere n'ime ọjọọ gburugburu: n'akụkụ oké osimiri ma ọ bụ na acid factory ebe. Biko ịzụta ịkwanyere ntekwasa yinye njikọ nsu. N'ihi na oké osimiri nnu ikuku na acid ikuku ngwa ngwa corrode zinc elu, ma ha apụghị ịnagide polima mkpuchi.
Previous: Hexagonal waya ntupu
Osote: Aluminium Window Screen
Electro kpaliri Chain Link ngere
Hot tinye kpaliri Chain Link ngere
Ịkwanyere ntekwasa Chain Link ngere